Izinqolobane Zokugcina Ubuhle - Thumela RELAY
Imikhuba emihle Yehlisa isisindo namarisidi Amakhambi ezemvelo Ubulili nobuhlobo ukunakekelwa
UCameroonia Imane Ayissi ungumdali wokuqala we-Afrika engezansi kweSahara ukuzumeka kwesonto ...
Esungulwe eParis iminyaka engamashumi amathathu, uCameroonia Imane Ayissi wenza umlando wemfashini ngoJanuwari 23 ngokuba ngumklami wokuqala ovela eSahara yase-Afrika ukuzamazama ngeParis Haute Couture Week. Ukuzalwa…
Izitayela zezinwele zase-Afrika ezivuselelwa yi-ANGE EKA
Waziwa ngomoya wakhe wobuciko nobuciko bokucabanga, umculi uvame ukuchazwa njengonobuhle futhi obedlangile. Futhi njengoba eyibeka kahle, wanquma ukwenza izinwele, lokho akufunayo. Ingelosi EKA, ...
Ama-5 womdlalo wefashini okufanele uwalandele
brylandobe Agasti 12, 2020 0
Imfashini emi-5 yemfashini okufanele uyilandele Sikhethe ama-filosofi angama-5 wemfashini okufanele uwalandele ngokuphelele ukuze ube nokubukeka okujabulisayo kuleli hlobo. Sonke sinokulangazelela empilweni! Abanye bangabalandeli be ...
UWilliam Franklyn Miller: umfana omuhle kakhulu emhlabeni!
ALEXIS WAYAN Agasti 1, 2020 0
UWilliam Franklyn Miller osemusha owenza amantombazane amancane aphuphe. Unamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka nezinwele ofuna ukuzisebenzisa ngeminwe yakho. UWilliam Franklyn Miller wazalwa ngoMashi 25, 2004 eLondon. Lo mfanyana omuhle uphila ...
ALEXIS WAYAN UJul 27, 2020 0
Izinto eziyishumi okufanele bazi nge-Zozibini Tunzi yaseNingizimu Afrika, okhethwe njengoMiss Universe 2019 Uneminyaka engama-26, owaseNingizimu Afrika wagcotshwa njengoMiss Universe 2019 emkhosini waminyaka yonke owawubanjelwe e-Atlanta (United States) ngoDisemba 8 . U…
Nakhu ukuthi ungagcina kanjani ukwakheka ngisho nangamamaski wokuvikela
brylandobe UJul 16, 2020 0
Nakhu ukuthi ungawugcina kanjani ukwakheka kwakho ngisho nangamamaski wokuvikela Onamamaski wokuvikela ukwakheka kwethu kokubuka ... Thola izeluleko eziningana ukuze uzigcine usesimweni usuku lonke! Yebo, thina ...
Nazi izinhlobo zokubhukuda ezenzelwe wena ngokusho kwesibonakaliso sakho sokufunda izinkanyezi
brylandobe Juni 30, 2020 0
Nazi izinhlobo zokubhukuda ezenzelwe wena ngokusho kwesibonakaliso sakho sokufunda izinkanyezi kulo nyaka sikumema ukuthi uthole ukuthi hlobo luni lokubhukuda olwenzelwe wena ngokuya ngesibonakaliso sakho sokufunda izinkanyezi! Izinkanyezi…
UZalando unyusa igiya ngokuthengisa imikhiqizo ebhekene ne-eco nge-2023!
Tchinde Juni 13, 2020 0
Ipulatifomu yokuthengisa ye-Zalando online inyusa amagiya uma kukhulunywa ngendalo. Okufanele ube nakho ngokwe-inthanethi, isayithi lomkhiqizo omningi uZalando wenza inguquko yakhe yemvelo. Yize…